တောထဲတောင်ထဲရောက် တိုင်းသိပြည်သိ အလှမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်ဖြတ်သန်းနေမှုများ ပိုလို့တောင် လှလာလေသလားပဲနော် – All Update News
ပရိတ္သ တ္ႀကီးေ ရ အလွမယ္ Bella ကိုလူတို င္းသိၿပီးျဖစ္မွာပါ၊ သူမဟာ MissMyanmar World2016 Winner ဆုရွင္တစ္ေ ယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
သူမဟာျပ ည္သူေတြႏွင့္အ တူအမွန္ တရားဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ တဲ့အလွမယ္တ စ္ေယာက္ျဖစ္ပါတ ယ္။ သူမရဲ႕ခ်စ္စ ရာေကာင္း တဲ့အၿပဳံးေ တြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ျ ကားနံမည္ျ ကီးပါတယ္။ Miss
တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔အႏုပ ညာေလာ ကထဲေရာက္ လာခဲ့တဲ့ျမ တ္သီရီလြန္ ကေတာ့ပ ရိသတ္အားေပးမႈရ ရွိခဲ့ၿပီးေအာင္ျ မင္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျ ဖစ္ပါတ ယ္။ ေနာက္ ပိုင္းမွာျမတ္သီရီလြ န္ကေတာ့ေျ ကျငာေတြနဲ႔ သီခ်င္းတွေ MTVေတြဆက္ တိုက္႐ိုတ္ကူး လာခဲ့တာဘဲျဖစ္ ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာအာဏာသိ. မ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းျပည္သူေ တြနဲ႔အတူ အႏုပညာရွင္ေတြက လက္မခံဘဲဆန ၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။ျမတ္သီရီ လြန္ကလည္းအမွန္တ ရားဘက္ကရ ပ္တည္ေပးခဲ့ၿပီးေႏြ ဦးေတာ္လွန္ေ ရးမွာပါဝင္ခဲ့တာဘဲျဖ စ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ျမတ္သီရိလြန္ ကလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ကိုေရာက္ရွိေန ၿပီးစစ္သင္တန္းေတြ တတ္ကာအာ ဏာရွင္ကိုဆ.န႔္က် င္ေနတာဘဲျဖစ္ပါ တယ္။ ခ်စ္ရတဲပရိ သတ္ေတြကလည္းျ မတ္သီရီ လြန္အတြက္ဂုဏ္ ယူခဲ့ၾကၿပီး အားေပးစကားေတြေျ ပာေပးေနၾကတာလည္းျ ဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ႀကီး လဲအျမန္ဆုံးၿငိ မ္းခ်မ္းၿပီးဖတ္ရႈ႕ေပးၾကတဲ့ျမန္ မာျပည္သူ /သားမ်ားအားလုံး စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာ က္ကေနအျမန္ ဆုံးလြ.တ္ေျမာက္ၾက ပါေစလို႔ဆုေတာ င္းေပးလိုက္ရပါ တယ္။
ပရိတ်သ တ်ကြီးေ ရ အလှမယ် Bella ကိုလူတို င်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ သူမဟာ Miss Myanmar World2016 Winner ဆုရှင်တစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာပြ ည်သူတွေနှင့်အ တူအမှန် တရား ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့ တဲ့အလှမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတ ယ်။ သူမရဲ့ချစ်စ ရာကောင်း တဲ့အပြုံးေ တွကြောင့် ပရိတ်သတ်ြ ကားနံမည်ြ ကီးပါတယ်။
Miss တစ်ယောက် အနေနဲ့အနုပ ညာလော ကထဲရောက် လာခဲ့တဲ့မြ တ်သီရီလွန် က တော့ပ ရိသတ်အားပေးမှုရ ရှိခဲ့ပြီးအောင်ြ မင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတ ယ်။
နောက် ပိုင်းမှာမြတ်သီရီလွ န်ကတော့ေြ ကငြာတွေနဲ့ သီ ချင်း MTVေ တွဆက် တိုက်ရိုတ်ကူး လာခဲ့တာဘဲဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာအာဏာသိ. မ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူေ တွနဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေက လက်မခံဘဲဆန ္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
မြတ်သီရီ လွန်ကလည်းအမှန်တ ရားဘက်ကရ ပ်တည်ပေးခဲ့ပြီးနွေ ဦးတော်လှန်ေ ရးမှာပါဝင်ခဲ့တာဘဲဖြ စ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မြတ်သီရိလွန် ကလွတ်မြောက်နယ်မြေ ကိုရောက်ရှိနေ ပြီးစစ်သင်တန်းတွေ တတ်ကာအာ ဏာရှင်ကိုဆ.န့်ကျ င်နေတာဘဲဖြစ်ပါ တယ်။ ချစ်ရတဲပရိ သတ်တွေကလည်းြ မတ်သီရီ လွန်အတွက်ဂုဏ် ယူခဲ့ကြပြီး အားပေးစကားတွေေြ ပာပေးနေကြတာလည်းြ ဖစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကြီး လဲအမြန်ဆုံးငြိ မ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန် မာပြည်သူ /သားများအားလုံး စစ်အာဏာရှင်လက်အော က်ကနေအမြန် ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြ ပါစေလို့ဆု တောင်းပေးလိုက်ရပါ တယ်။
Previous Article ကိုယ်တိုင်က တောထဲရောက်နေပေမဲ့ အများအကျိုးကို ပစ်မထားကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဆူးရိုင်းနှင်းဆီ မင်းမော်ကွန်း
Next Article နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ ရင်ထဲ ထိရှသွားစေမယ့် အမိုက်စားပုံရိပ်တစ်ခုကိုချပြလိုက်တဲ့ မင်းသားချောတိုင်ရွန်(ပေါ်တော်မူ မင်းသားလေး ကိုယ်ထင်ပြပြီလေ)